रक्सीले यौन जीवनमा कस्तो असर गर्छ ?::Best News Experience from Nepal
रक्सीले यौन जीवनमा कस्तो असर गर्छ ?
एजेन्सी । संसारभर मादक पदार्थको सेवनपछि यौनमा रमाइलो हुन्छ भन्ने मान्यता छ । यही कारण ठूला शहरका पार्टीहरुमा जोडीलाई मात्र विशेष महत्व दिइन्छ ।
मनोवैज्ञानिकहरुले पनि मादक पदार्थ र यौनबीच के सम्बन्ध छ भन्ने कुराको लामो समयसम्म खोज गरेका छन् । यसमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय सर्वेलाई ‘बियर गुगल’ भन्ने गरिन्छ । ‘बियर गुगल’ मनोविज्ञानको क्षेत्रमा प्रयोग हुने चर्चित् पदावली हो ।
मनोवैज्ञानिकहरुले मध्यपान गर्ने व्यक्तिहरुबीच गरेको ‘बियर गुगल’ सर्वेमा एउटा रमाइलो तथ्य आएको थियो । त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई बियर वा रक्सी पिउन दिएपछि फोटोमा हेर्न लगाई केही व्यक्तिहरुको प्रतिक्रिया लिइएको थियो । बियर वा रक्सी पिएर र नपिएको अवस्थामा व्यक्तिमा एउटै फोटोलाई हेर्दा देखिने प्रतिक्रियाका आधारमा नतिजा निकालिएको थियो । आज हामी त्यही नतिजाको आधारमा बियर वा रक्सीले यौन जीवनमा कस्तो असर गर्छ भन्ने बारे चर्चा गरेका छौँ ।
– रक्सी वा बियरको सेवनले यौन व्यवहारमा धेरै असर पर्न सक्छ । यसको प्रभावले यौन क्रियाकलाप घटाउँछ । आफ्नो लाजलाई लुकाउन खोज्दा मनोवैज्ञानिक असर पर्छ । क्षणिक रुपमा उत्तेजित गरिसकेपछिको अवस्थामा सेवनकर्तामा दिक्दारीपन बढाउँछ ।
– रक्सी सेवनपछि शारीरिक प्रणालीको सन्तुलनमा प्रतिकूल असर पर्न थाल्छ । रक्सी सेवनले खुशी र रमाइलो हुने अधिकांशको धारणा पाइन्छ । तर, यसको सेवनले दिक्दारीपन वा रिस बढ्न सक्छ । सन्तुलन वा समन्वयहरुमा पनि नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।
– मादक पदार्थ सेवनले स्खलनमा समस्या ल्याउने मात्र नभई नपुंसकता पनि बढाउँदै लैजान्छ । सबैभन्दा बढी रक्सीको असरले आत्मबल घटाउँछ । परिणाम, पुरुषको यौन व्यवहारमा नाटकीय असर पार्छ ।
– अनुसन्धानहरुले देखाएअनुसार, थोरै पनि मादक पदार्थ सेवनले अण्डकोषबाट उत्पादन हुने टेस्टोस्टेरोन हर्मोनमा कमी आउँछ । टेस्टोस्टेरोन हर्मोन यौन उत्तेजनाका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
– रक्सी सेवनले पुरुषको यौन क्रियाकलापमा असर पार्छ । अनुसन्धानअनुसार यौन सन्तुष्टि, यौन उत्तेजना, वीर्य स्खलन र चरम आनन्दमा पनि यसले कमी ल्याउँछ ।
– यौन सम्पर्क गर्नुअघि रक्सी सेवनले विभिन्न जोखिम निम्त्याउने सम्भावना पनि हुन्छ । जस्तै- असुरक्षित यौन सम्बन्ध, अनिच्छित गर्भधारण, बलात्कार साथै यौन रोगको पनि उच्च जोखिम हुन्छ । तर, धेरै युवा यसलाई स्वीकार गर्दैनन् ।